IHubris yoThengiso lweGeocentric | Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 18, 2008 NgeCawa, ngo-Novemba 3, 2013 Douglas Karr
UCopernicus wayengoyise we-astronomy yanamhlanje xa wayephikisana ne-heliocentrism malunga ne-geocentrism. Ngamanye amagama, ilanga yayisisazulu senkqubo yethu yeeplanethi, hayi uMhlaba. Kwakunyelisa kwaye wayechasene nenkcubeko yonke yabaphengululi eyayidibene nenkolo ngelo xesha. Kodwa wayenyanisile.
Ifakwe kwiNtengiso, sinomcimbi namhlanje. Ngesizathu esithile, xa iinkampani zikhula, ziqala ukucinga ukuba ngandlel 'ithile ziziko lenkqubo yethu yorhwebo. Namhlanje, ndifumene i-imeyile evela kwiMida kwiMida yeMivuzo yeZinto-inkqubo entsha yokwazisa iMida kwezinye iinkampani abanokunqwenela ukuthenga nazo:
Ndingu Imida fan. Kude kube kuvulwe iiBarnes neNoble ngaphaya kwesitalato, bendihlala ndisiya Imida phantse zonke iimpelaveki. Ndiyazithanda iivenkile zabo, umculo wabo odlalayo kunye nekofu yabo. Ndandidla ngokuchitha iiyure apho ndiphumle kwaye ndifunda.
Imida ibonakala ngathi ilungelelanise iqhinga labo kule-mhlawumbi ukuzama ukuya entloko ukuya entloko Amazon. Umahluko kukuma, nangona kunjalo. IAmazon ihlala ihleli njengendawo yokuthengisa kunye nokusabalalisa isihogo esikhulu ekutshintsheni indlela umhlaba owenze ngayo ishishini. Imida yavula iivenkile ezithengisa iincwadi.
iihubhu: ikratshi eligqithisileyo okanye ukuzithemba; ikratshi.
Ndiyakholelwa ngokwenyani ukuba le yimpazamo. Iziko lehlabathi lezorhwebo alikho ngakwivenkile yakho, lijikeleze umthengi wakho. Ukuba umthengi ubona njengevenkile yeencwadi, qhubeka nokusebenzisa izixhobo apho baya kukuvuza kakhulu. Olu hlobo lokucinga luyingozi kwaye lunokuphulukana nengqwalaselo yenkampani yakho kwaye ligunya kwishishini. Ukuba ufuna ukuba yenye into, hamba wenze enye into!
Andizukuthenga igumbi lasehotele okanye isuti ngeMida! Imivuzo ayibalulekanga kum xa uzama ukundinika isando, isikwere, ngomngxunya osijikelezileyo.
tags: imidaimida imivuzoemail Marketing
I-2.0 yeWebhu yoNikezelo lweShishini
Mar 18, 2008 ngo 7:39 PM
Ukuqonda okuhle kwakhona Douglas. Ndicinga into efanayo xa ndibona abantu beqondisa umxholo wabo kwindawo yejografi. Kufana nokuvuka phambi kwehlabathi liphela ngombhobho kwaye uthetha kuphela kumqolo wokuqala.
Blogu kwihlabathi jikelele, sela ekuhlaleni!
Mar 18, 2008 ngo 7:59 PM
Ndiza kusebenzisa oko, Dave! Yithande!
Mar 19, 2008 ngo 6:38 PM
Uhlobo olufana nooMcDonalds okhonza iLattes, ngaphandle kokuba ibhega inencasa…lol
Mar 19, 2008 ngo 7:05 PM
Ukuthetha ngayo... uyibonile lonto Ikofu kaMcDonald yayinophononongo olungcono kune-Starbucks?
Mar 19, 2008 ngo 7:24 PM
Yima nje-ii-Starburgers zisendleleni. Ngethemba ukuba abawatshisi nabo.
Mar 19, 2008 ngo 8:43 PM
Meyi 6, 2008 kwi-5: 04 PM
"Uhlobo olufana nooMcDonald's okhonza iLattes, ngaphandle kokuba ibhega inencasa?lol"
Heyi, eGuatemala, uMcDonalds une "McCafe". Ligumbi elahlukileyo elongezwe kwiMcDonalds, kwaye lihamba kakuhle. Abantu bayayithanda ngokwenene. I-Starbucks ayinakuyenza apho i-9 ibiza kakhulu, kwaye iGuatemala kulapho ikofu elungileyo iqala khona).
Jonga iwebhusayithi yam ukuze ndidlale kwakhona kwisihloko sakho.